Roma: Antonio Ruffini l'uomo con il dono delle stimmate | Ilblogdellapreghiera
Rome: Antonio Ruffini nwoke nwere onyinye nke stigmata
A mụrụ Antonio Ruffini na Rome na 1907 na Disemba 8, oriri nke Immaculate Conception. Akpọrọ ya aha nsọpụrụ nke Anthony Anthony, bụ ọkpara n'ime ụmụ nwoke atọ ma bie na ezinụlọ siri ike ma nwee oke ilebara ndị ogbenye anya. Mama ya nwụrụ mgbe Antonio dị obere. Naanị Antonio nwere ụlọ akwụkwọ elementrị mana, site na nwata, o jiri obi ya kpee ekpere kama iji akwụkwọ. O nwere ohuru ohuru banyere Jisos na Meri mgbe odi iri na asaa. O zoputara ego ya wee gaa Africa dika onye ozi ala ọzọ dina. Ọ nọrọ otu afọ na-eleta obodo nta niile, na-abanye n'ụlọ obibi iji lekọta ndị ọrịa ma mee ụmụ ọhụrụ baptizim. Ọ laghachila Africa ugboro ole na ole ọzọ ọ dịka o nwere onyinye nke xenoglossia, nke bụ ikike ịsụ ma ghọta asụsụ mba ọzọ na-amụbeghị ya. Ọ ma na olumba ndị agbụrụ dị iche iche. Ọ bụkwa onye na-agwọ ọrịa na Africa. Ọ ga - ajụ ndị mmadụ ajụjụ banyere ọrịa ha, ya mere, Chineke ga - agwọ ya site na mkpịsị ahịhịa nke Antonio ga - achọta, sie ma kesaa. Ọ maghị ihe ọ na-eme: ọ bụ ihe amamihe niile. N'oge na-adịghị anya okwu ahụ gbasara n'obodo ndị ọzọ.
Ngosipụta nke ọbara akwụkwụ na Antonio Ruffini mere n'August 12, 1951 ka ọ na-alọta ọrụ dịka onye nnọchi anya otu ụlọ ọrụ kechiri akwụkwọ ahụ, yana Via Appia, site na Rome gaa Terracina, n'ụgbọ ochie. Ọ dị oke ọkụ ma ejiri mmiri na-enweghị ike ịnagide Ruffini. Mgbe ọ kwụsịrị ụgbọ ala ahụ, ọ banyere isi iyi ọ chọta obere oge mgbe nke ahụ gasịrị. Na mberede, ọ hụrụ otu nwanyị na isi iyi ahụ, n'ụkwụ nkịtị, kpuchie uwe mkpuchi ojii, nke o kwenyere na ọ bụ onye ọrụ ugbo mpaghara, bịakwara ị .ụ mmiri. Ozugbo ọ bịarutere, ọ sịrị, “Drinkụọ ma ọ bụrụ na akpịrị kpọrọ gị nkụ! Ọ gbakwụnyere, sị: "Olee ihe merụrụ gị ahụ? "Ruffini, onye bịakwutere aka ya dị ka iko ka ọ drinkụọ mmiri, ọ hụrụ na mmiri agbanweela n'ọbara. Ffhụ nke a, Ruffini, n'aghọtaghị ihe na-emenụ, gakwuuru nwanyị ahụ. Ọ mụmụrụ ya ọnụ ọchị ma malite ịgwa ya okwu banyere Chineke na ịhụnanya o nwere n’ebe ụmụ mmadụ nọ. Ọ tụrụ ya n'anya ịnụ okwu dị egwu n'ezie ya na ịchụ àjà ndị ahụ anaghị egbu oge nke obe.
Mgbe ọhụụ ahụ kwụsịrị, Ruffini, kpaliri ma nwee obi ụtọ, wee banye ụgbọ ala ahụ, mana mgbe ọ nwara ịpụ, ọ chọpụtara na azụ na ọbụ aka ya na-emeghe nnukwu ọnya ọbara ọbara pụtara ka agbasasị dị ka a ga-asị na ọ na-agba ọbara. Bọchị ole na ole mgbe nke a gasịrị, oke ikuku na mmiri ozuzo kpọtere ya n'abalị n'abalị wee bilie imechi windo. Ma ọ hụrụ na ihe ịtụnanya na mbara igwe juputara na kpakpando ma abalị ahụ gba nkịtị. Ọ chọpụtara na ọbụna ihu igwe n'ụkwụ ya obere iru mmiri, ihe pụrụ iche ọ chọpụtara na mberede, ọnya dịka ndị nọ n'aka ya apụtawo n'azu ya na n'ogwe ụkwụ ya. Site na mgbe ahụ, enyerela Antonio Ruffini onyinye kpamkpam nye ndị mmadụ, ọrụ ebere, ndị ọrịa na enyemaka nke mmụọ nke mmadụ.
Antonio Ruffini nwere ikike eji n’aka ihe karịrị afọ iri anọ. Ha gafere n'ọbụ aka ya wee nyochaa ndị dọkịta, ndị na-enweghị ike ịkọwa ụzọ ezi uche dị na ya. N’agbanyeghi eziokwu na ọnya ndị a doro anya n’aka ya, ha adaghị ọrịa. Poopu Pius XII nke nwere nsọpụrụ nyere nkwado ka otu ụlọ ekpere mechie ebe Ruffini natara stigmata na Via Appia na Nna Tomaselli, ọrụ ebube ahụ, dere akwụkwọ nta banyere ya. Ekwuru na Riffuni nwere onyinye nke bilocation. . Mgbe o nwesịrị stigmata, Antonio ghọrọ onye otu nke Iwu nke St. Francis ma kwe nkwa nke nrube isi. Ọ bụ nwoke dị obi umeala. Mgbe ọ bụla mmadụ jụrụ ịhụ ihe ihere, ọ tamuru obere ekpere, susuo obe ahụ, wepụ uwe ya wee sị: “Lee ha. Jizọs nyere m ọnya ndị a, ọ bụrụ na ọ chọọ, ọ ga-ewepụ ha. "
Ruffini na Pope
Afọ ụfọdụ gara aga, Nna Kramer dere ihe ndị a banyere Antonio Ruffini: “Mụ onwe m amaara Ruffini ọtụtụ afọ. Na mbido 90s, a jụrụ Ruffini na ezighi ezi n'ụlọ ya: "John Paul II bụ Poopu nke ga-eme nraranye nke Russia?" Ọ zara, "Ee e, ọ bụghị John Paul. Ọ gaghị abụ onye ga-anọchi ya ozugbo, mana nke na-esote ya. Ọ bụ ya ga-edo Rọshịa nsọ. "
Antonio Ruffini nwụrụ mgbe ọ dị afọ 92, ọbụnadị mgbe ọ nwụrụ, o kwupụtara nke ọma na ọnya ndị ahụ dị n'aka ya, dịka nke Kraịst kwesịrị ịhapụ mbọ maka mkpagbu, bụ "Onyinye nke Chineke.
← Na post gara aga Gara aga post:News: "mgbe ejidechara obi m mgbe m nọ n'eluigwe, aga m agwa gị otu ọ dị"
Ọzọ Post → Post ozo:Poopu: Chineke nyere aka ndị ọchịchị, dịrị n'otu n'oge nsogbu maka ọdịmma ndị mmadụ